Büyükakın nye Yahya Captain 'Tram release - RayHaber
HomeTurkeyMpaghara Marmara41 KocaeliBüyükakın nye Yahya Captives Tram Nkọwa
11 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 41 Kocaeli, ụgbọ okporo ígwè, General, KENSİÇİ Rail Systems, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Turkey, tram 0
nkọwa tram na ndị isi
Union of Municipality of Marmara na Kocaeli Mayor Assoc. Dr. Tahir Büyükakın, Izmit Yahya Captain Top management Onye isi Ahmet Yavuz, na Yuvam Top Management Onye isi oche Adem Elbas, yana njikwa East Marmara Customs na Foreign Trade Regional Manager Mehmet Ali Arslan na oge gara aga, onye otu AK Party Izmit District Onye isi oche Hasan Ayaz nabatara n'ọfịs ya. Mayor Büyükakın mere nyocha na okwu ndị metụtara ndị ọbịa ya na-emetụta obodo na obodo ahụ nke ọma ma kwusi ike na usoro ụgbọ oloko ga-agbakwunye na mmepe obodo. Mayor Büyükakın kwuru nkwupụta banyere ụgbọ ala tram na-aga mpaghara Alikahya na TV Agenda Pụrụ Iche na 41 ma kwuo okwu dị mkpa n'ọtụtụ okwu.
“Ndị njem puku na 50 ga-aga ÖN
Büyük Mgbatị ahụ a na-aga n'okporo ụzọ Akçaray dị na Izmit Center ka na-aga n'ihu, "Onye isi obodo Büyükakın kwuru, onye gwara Yuvam na onye isi njikwa Yahya Kaptan," A na-aga n'ihu na-ewu okporo ụzọ ụgbọ ala na-aga Kuruçeşme. Anyị nwere ahịrị ga-esi na mpaghara Mehmet Ali Pasha, nke bụ ahịrị ọzọ, gaa ụlọ ọgwụ obodo. Ebu amụma na ndị njem 50 puku ndị njem ụlọ ọgwụ obodo ga-aga kwa ụbọchị. Ahịrị ọzọ ga-aga n'Ọgbọ egwuregwu Kocaeli dị na Alikahya, ebe anyị na-atụ anya njem siri ike. Courtlọ ikpe ọhụrụ ga-esitekwa na iwu EDOK. Ọ bụrụ na a ga-akwaga ụlọ ebe ahụ, nsogbu ga-ada
N'ihi nke a, enweghi uzo doro anya ”
Mayor Ali Assoc kwuru, "mpaghara Alikahya, Kocaeli na ụlọ ikpe n'ihi usoro tram ga-aga mpaghara ahụ." Dr. Tahir Büyükakın kwuru, Yah Ọmụmụ ihe ndị ọzọ na-aga n'ihu ga - aga n'ihu ma eriri a ga - agbada site n'aka onyeisi ụgbọ mmiri nke Yahya wee si na mpaghara ụlọ ọrụ Sembol gbagoo ma ọ bụ gaa mpaghara mpaghara Alikahya site na azụ nke ọnụ. Enweghị eriri ikpeazụ. Ọ bụrụ na akara a na-aga n'akụkụ nnukwu ụlọ ahịa, enwere mpaghara ebe a na-akụ osisi. Anyị nwere ụmụ amaala na mpaghara ahụ na-echegbu onwe ha igbutu ụfọdụ osisi na mpaghara ahụ. O nweghi ohere ị ga-eji rụpụta ọrụ na-enweghị agwa ndị amaala anyị nọ na mpaghara ahụ okwu ma ọ bụ gafere ebe ọzọ na-agwaghị ndị obodo anyị okwu. Ma ugbua enweghi oru ma ọ bụ kpebisiri ike ikwurịta. Enwere ọrụ pensụl ojii ma ọ bụrụ na ọ nwere ike ịgafe, enweghị ọrụ mmejuputa nkwekọrịta doro anya. Ọ gaghị adị mkpa ịmalite mkparịta ụka tupu ha emee ..
KWES ALRTER AHTER NA-EGO NA-EKWU VAR
Onye isi obodo Büyükakın gara n'ihu n'okwu ya dịka: “Ka ụmụ amaala anyị na mpaghara Yahya Captain nwee ntụsara ahụ. Onweghi oru ngo a wusiri emebe, onweghi mkpebi nkenke ego. Ọ bụrụ na o nwere ọnọdụ gbara ọkpụrụkpụ karịa ya ka ọ gafee, mgbe ahụ ha ga-anọdụ ala ma soro ha kwurịta okwu. Mana anyi enweghi oru n’ebe ahu. Anyị enweghị mkpebi ego itinye ego. Enwere naanị ọmụmụ ụzọ ndị ọzọ. E nwere ụzọ ọzọ ị ga-esi ruo Alikahya, ụlọ ikpe yana ama egwuregwu Kocaeli site n’azụ ọdụ ụgbọ. Agbanyeghị, ụzọ anyị si aga ụlọọgwụ obodo ahụ bịara doo anya ma na-arụ ọrụ mmezu ndị a. "
Yahya emegideghị Captain's Tram 30 / 07 / 2019 Remzi Özkan, Onye isi oche nke CHP Izmit Yahya Captain Neighborhood Assembly, kwuru banyere esemokwu na nso nso a na agbata obi, "Anyị emegideghị tram. Dị ka akụkọ ahụ si kwuo, "Izmit Yahya Kaptan agbata na mpaghara osisi nke ebubo okporo ụzọ ụgbọ ala ahụ azọrọ ebubo, ndị bi na mpaghara ahụ kwuru. na ahihia, o gosiputara mmeghachi omume ya site n’inwe pikinik. Nzukọ CHP agbata obi tinyekwara aka na arụmụka trolley dị na agbataobi. N'uhuruchi gara aga, onye nnọchi anya mmụọ nke CHP Yahya Captain na CHP zutere ndị otu Mgbakọ Metropolitan, mahalle agbata obi
Ndị na-ebipụta na Judya mere ka a tọhapụ ha 10 / 02 / 2016 Captain Yahya bi mere a pịa kwuru: tram ngo bụ banyere 1 izu megide ọnwụ nke osisi n'ime akporo nke omume na mere a pịa okwu bi Captain Yahya. N'Ógbè bi, "ma anyị na-ejighi ihe anyị nwetara ọ bụla ọzọ," ka tram oru ngo, na-emegide na ọnwụ nke osisi na banyere 1 izu nke edinam Yahyakaptan bi onye jikọghachiri pịa tọhapụ mere. Atilla Yüceak mere nkwupụta ahụ maka agbata obi gbakọtara na Prestij Café dị na Yahya Kaptan. Yüceak kwuru, gibi Anyị bụ ndị mmadụ ole na ole, ma anyị enwebeghị obere ihe. Anyị furu efu ihe anyị furu efu, ma anyị nwere ike iji mpako kwuo mpako na anyị emeriwo
Ozi ọma si n'aka President Büyükakın gaa na ndị ọrụ ụgbọ njem 29 / 05 / 2019 Ụgbọ njem Ụgbọ njem A.Ş. 785 nke na-eche banyere ọrụ 1 na-arụ ọrụ na. A bịanyere aka n'akwụkwọ Nkwekọrịta Mkpokọta. Mayor nke Kocaeli Metropolitan Municipality Assoc. Dr. Tahir Büyükakın na Türk-Onye isi oche Ergün Atalay tinyere aka nkwekọrịta nkwekọrịta mkpokọta n'etiti ndị ọrụ na ndị ezinụlọ ha sonyere nzukọ ahụ. Mgbe ememe ncheta, Mayor Büyükakın nyere ozi ọma ahụ tupu ememme ahụ na a ga-akwụ ụgwọ dị iche iche na nkwekọrịta a, a ga-akwụ ụgwọ ọnwa ahụ ma kwụrụ ụgwọ oriri. N'aka nke ọzọ, onyeisi oche Türk-ı President Ergün Atalay kwuru na a gaghị echebara ọhụụ ọnwa nke onye ọrụ anya. 5 BỤGHỊ ọrụ Ọkwọ ụgbọ okporo ígwè-ọrụ ndị ọrụ na Türk-İş Confederation ...
Pọọga na Hero Driver si Büyükakın 21 / 06 / 2019 Union of Municipalities of Marmara na Kocaeli Mayor Assoc. Dr. Tahir Büyükakın, Abdullah dị afọ ise echefuru n'ụgbọala ya ruo awa atọ n'ime ụgbọ ahụ site n'inyefe ezinụlọ ya n'enweghị ihe ọ bụla nyefee onye ọkwọ ụgbọala nke Ụgbọ njem Inc. Isa jara onye ọkwọ ụgbọala ahụ bụ Jesus Yildirim mma. Obodo ukwu obodo Deputy Secretary General Gökmen Mengüç na Deputy General Manager nke Ụgbọ njem Ụgbọ njem Zafer Aydın kelere Yıldırım maka uche ya wee sị, "Ihe mgbaru ọsọ anyị bụ isi bụ ijere ụmụ amaala anyị ụzọ dị mma. Anyị na-enye ndị enyi anyị ọzụzụ niile dị mkpa maka nke a. N'ọnọdụ dị aṅaa, ihe ị ga-eme otu otu ...
Ọfịs Ọkachamara Kwesịrị Ịsọpụrụ Dịka Ịchọpụta 08 / 07 / 2013 A ghaghị ịkwanyere onye ọrụ ụgbọelu dị ka onye na-anya ụgbọelu. Na-ekwu na onyeisi ụgbọ ala kwesịrị inwe ebe kwesịrị ekwesị dị ka onye na-anya ụgbọelu. Hayri Baraçlı kwuru na ha malitere "Ụgbọ njem Academy Project" iji mejuputa ụkpụrụ ọrụ. Kọmitii na-ahụ maka ọrụ nhazi (Myk) Transport, Logistics na Kọmitii Mmekọrịta; Metrobus Driver Standard Business, Ụgbọ njem na-adọkpụ obodo, Bus Driver, Driver Minibus, Driver Vehicle Driver and Driver Driver were gathered at Kağıthane Social Facilities iji kwurịta Ụkpụrụ Ọrụ. Onye isi njikwa nke IETT Hayri Baraçlı, Minista Ụgbọ njem, Maritime Affairs na Onye Mmekọrịta Nkụzi Prof. National Education na Mustafa Karaşahin ...
MMO na-akwado mkpọsa mbinye aka na-aga n'ihu na Yahya Kaptan 09 / 08 / 2019 Onye isi oche nke ndị injinia Mechanical President Murat Kürekçi na ndị otu ndị isi, Yahya Kaptan ịgbanwe ụzọ ụgbọ ala iji kwado mkpọsa mbinye aka na-aga n'ihu. Kürekçi kwuru okwu dị mkpa ebe a. Yahya Kaptan Mgbasa mbinye aka nke Platform nke anyị niile gbanwere ụzọ ụgbọ ala na-aga n'ihu. N'ọnọdụ a, Onye isi oche nke Chamlọ Ọrụ Ndị Na-ahụ Maka Ndị Ọrụ N'ọrụ Igwe Murat Kürekçi kwadoro ụlọ ntu mbinye aka. Tinyere Kürekçi, ndị otu òtù MMO Selçuk Karstarlı, Hüseyin Çelik, Serkan Demir na onye otu kompeni Serkan Yayla bịakwara. ỌGW ENGW EN AKW ENKWỌ EGO NA-Egosipụta na ha anaghị emegide oru ụgbọ ala kama na ụzọ dị adị kwesịrị ka agbanwe ya…
Ọganihu Büyükakın nwere obi ụtọ 05 / 08 / 2015 Obi ụtọ Büyükakın: Ekwenyere m na ụgbọ okporo ígwè ahụ bụ ihe nlereanya kachasị mma maka njem obodo na mpaghara nnukwu ma dị larịị na obodo ndị jupụtara na ya. Nsogbu kachasị mkpa nke obodo anyị bi na ya bụ nsogbu nke dabara na igafe ọha. Anyị na-anwa ịmebe usoro njem njem ọha na eze dị iche iche nke a na-enyefe na ọdịbendị nke minibus, omume na obi ụtọ ruo ọtụtụ afọ. N'ezie, a ghaghị inwe nhọrọ ọhụrụ maka igafe ndị mmadụ na ihe ọhụụ dị mkpa na nke dị mkpa n'obodo a. Otú ọ dị, m na-eche maka Izmit, ihe ngwọta maka usoro njem ọha na eze abụghị tram - ya bụ, okporo ígwè okporo ígwè. Ị nwere ike na-agba ọsọ ụgbọ oloko a n'obodo a ọwụwa anyanwụ. Ebe obodo ndi mmadu na-aga ...
Büyükakın Akçaray Tramway Project achọpụtara 29 / 08 / 2016 Achọpụtara na Büyükakın Trak Project Trak: Secretary General nke Kocaeli Metropolitan Municipality Assoc. Dr. Tahir Büyükakın, na-aga n'ihu na-arụ ọrụ ndị ahụ. Büyükakın esonyere Deputy Secretary General Gökmen Mengüç, Onye Nchịkọta Ọchịchị Adnan Bilgiç na Ngalaba Ụgbọ njem President Mustafa Altay. Büyüakın, Kocaeli Metropolitan Municipality Akçaray Tram Project, nke a na-ewu, Outlet Center Junction, Gölcük Asar Creek Nzuzu, Goodyear Junction ọmụmụ e mere. AKÇARAY Natara ozi gbasara ọrụ n 'ọrụ Akçaray, nke a na-arụ ma na-ahazi na mpaghara dị iche iche site na Obodo Metropolitan, Assoc. Dr. Tahir Büyükakın mere nnyocha. ...
Yahya Captain na-achọpụta mgbe Tram Works 05 / 06 / 2017 Mgbe Tram Na-arụ ọrụ Yahya Kaptan na-agbake: Izmit Yahya Kaptan Neighborhood, nke na-enwe nsogbu dị egwu maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu afọ n'ihi mgbidi tramways, eruola njedebe nke ọrụ nrụzi n'okporo ámá na n'okporo ámá ebe ụgbọ okporo ígwè ahụ na-agafe. LINE Drawings Yahya Kaptan neighborhood streets and streets, 3 kilomita nke ngụkọta ụzọ 12.500 tọn nchịkọta mara ọkwa. Ụzọ okporo ụzọ, re-emeghe okporo ụzọ ụgbọala. Ndị isi obodo obodo Kocaeli, ruo na ngwụsị nke ọnwa a, a ga-adọta okporo ụzọ n'okporo ámá, a ga-ekwupụtakwa ọhụụ ọhụrụ na ọkụ ọkụ. ASPHALT NA-ABỤ BULVAR Mgbe n'okporo ámá na n'okporo ámá ndị dị na neighborhood Yahya Kaptan, n'izu sochirinụ, ìgwè ndị Gazi ukwu
Ọdịdị ndị na-amalite Tram na-amalite na Yahya 20 / 07 / 2019 Ndị Yahya Kaptan nọgidere na-eguzogide nrube okwu ahụ na nhazi nke abụọ nke Tram Line atụmatụ nke Ngalaba Ụgbọ njem Kocaeli Metropolitan Municipality. A na-ewere okporo ụzọ tram line (Akçaray) nke Kocaeli Metropolitan Muncality (Akçaray) dị ka otu n'ime ụzọ ndị ọzọ maka oru ngo nke abụọ, Yahya Kaptan, bụ onye malitere ọrụ gara aga, ndị bi n'ógbè ahụ n'oge a, "Buru nri ụtụtụ, thermos, bịa," okwu ahụ n'okpuru osisi a kpọrọ òkù na picnic. 21 Picnic Na July Sọnde na 11.00, a ga-eme njem ihu igwe Yahya Captain na n'ihu Ụlọ Ahịa Symbol. A ga - ekepụta uche na picnic ka ị ghara egbutu osisi dị nso na 500 na ụzọ ọrụ ahụ.
Azụ ụgbọ okporo ígwè
Ọrụ ndọtị nke Akçaray tram
Nweta Korameli Stadium Tram Line
Yahya emegideghị Captain's Tram
Ndị na-ebipụta na Judya mere ka a tọhapụ ha
Ozi ọma si n'aka President Büyükakın gaa na ndị ọrụ ụgbọ njem
Ọfịs Ọkachamara Kwesịrị Ịsọpụrụ Dịka Ịchọpụta
Ọganihu Büyükakın nwere obi ụtọ
Büyükakın Akçaray Tramway Project achọpụtara
Yahya Captain na-achọpụta mgbe Tram Works